म ‘लास्ट बेञ्चरवाला’ हुँ तर आत्तिएको छैन : गगन थापा | Ratopati
‘दुवै महामन्त्री मिल्छौँ, सभापतिलाई सफल बनाउँछौँ’
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeपुस १५, २०७८ chat_bubble_outline0
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महामन्त्रीको भूमिकामा खरो रूपमा उत्रिएर सभापतिलाई बल पुर्‍याउने बताएका छन् । पार्टी संरचनामा सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्चश्व भए पनि महामन्त्रीका रूपमा काम गर्न चुनौती नहुने थापाको भनाइ छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र आफूबीच पार्टीलाई विधानसम्मत सञ्चालन, आगामी स्थानीय निर्वाचन र सरकार सञ्चारका सन्दर्भमा छलफल भइरहेको थापाले बताए । १४ औँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकपछि रातोपाटीसँग कुराकानीमा थापाले सभापति देउवा र सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालाको अभिव्यक्तिले आफू उत्साहित भएको बताए ।
महामन्त्री भएपछि कुनै पनि विषयमा राय आउन ढिला भए पनि अडान भने नबदलिने थापाले बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब मेरो राय कतिपय कुरामा हिजोको भन्दा ढिलो आउन सक्छ । तर, राय बदलिन्छ भन्ने होइन । म बदलिन्छु भन्ने होइन । आफू उभिएको ठाउँमा पार्टीलाई उभ्याउने कोसिस गर्छु ।’
महाधिवेशनपछिको काँग्रेस, महामन्त्री हुँदाको अनुभूति, वरीयता विवाद र देउवाको दोस्रो इनिङको सङ्केतलगायतका विषयमा महामन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –
१४ औँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा तपाईंमा खुसी देखिएको थिएन । महामन्त्री भएपछि पदाधिकारीको हैसियतले अग्रपङ्क्तिमा बस्दा केही असहज फिल गर्नुभएको हो ? सिनियर नेतालाई तल देख्दाको अनुभूति के रह्यो ?
म १२ औँ महाधिवेशनबाट नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेँ । त्यो बेलामा पनि पार्टीको वरीयता क्रममा कनिस्ट सदस्य थिएँ । मेरो बसाइ पनि छेउको कुर्सीमा हुन्थ्यो । त्योबेला मैले पार्टी सभापति र पदाधिकारीलाई आफ्नो विषय सुनाउन प्रयास गर्थेँ । तर,कहिल्यै पनि पार्टीका पदाधिकारी वा निर्णयकर्ताहरुले महत्त्व दिएको महसुस नै गर्न पाइनँ । त्यसले मेरो मनमा पदाधिकारी बसेकै ठाउँमा जाने हो भन्ने लाग्यो र मैले एउटा अठोट गरेँ । त्यहीअनुसार १३ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीको प्रत्याशी भएँ ।
त्यसपछिको पाँच वर्ष फेरि मेरो अनुभव केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा रह्यो । अनि १४ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री बनेपछि पदाधिकारीको पङ्क्तिमा बसेर अस्ति (पुस १० गते) केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा सहभागी हुने मौका पाएँ । मलाई एउटा खालको गौरवको अनुभूति पनि भइरहेको थियो ।
म त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर मात्र बसेको मान्छे । संसद् र पार्टीको वरीयता क्रममा पनि पछाडि थिएँ । सँगसँगै मेरो बानी पनि पछाडि बस्ने बनिसकेको थियो । म लास्ट बेञ्चरवाला हो । पछाडि बस्ने र आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने गर्थेँ । म आफूले आफैँलाई लो प्रोफाइलमा राखेको थिएँ ।
नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टीको बैठकमा यत्रो नेताहरूको बीचमा पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव पेस गर्न पाउने कुरा मेरा लागि एकदमै गौरवको अनुभूतिको कुरा थियो । म एकदम सन्तोष पनि मानिराखेको थिएँ । तर,कता–कता मनमा एकखालको डर,अलिअलि अप्ठ्यारो थियो । अगाडि हेर्दै गर्दा नेता नै नेता हुँदा अलिअलि असहजजस्तो लागिरहेको थियो । म अलिअलि आत्तिएको पनि थिएँ ।
महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि तपाईंमा देखिएको चमक केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा प्रकट नहुनुमा केही असन्तुष्टि पनि थियो कि ?
त्यस्तो केही थिएन । त्यो बेला मैले तल हेरेँ । यो केन्द्रीय समितिमा आइपुग्नैपर्ने थुप्रै साथीहरू बाहिर छुट्नुभएको छ । योपटक केन्द्रीय समितिमा आउन चाहनुहुन्थ्यो । आइपुग्न पनि पर्थ्यो,आइपुग्न पनि सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूको रिक्तताले मलाई एक किसिमको खल्लो लागेको थियो । तर,तपाईंले भने जस्तो अलिअलि असहज लागेकै हो ।
यही असहजताका बीच शीर्ष नेतालाई पनि समेटेर जाने दायित्व छ । कोही सभापतिका प्रत्याशी हुनुहुन्छ । कोही महाधिवेशनको मैदानमा नआएर बाहिरै छुट्नु भएको छ । अब उहाँहरूलाई कसरी समेटेर लिने कुरामा पार्टीभित्र के तयारी भइरहेको छ ?
यसमा मुख्य निर्णय लिने काम पार्टी सभापति हो । हामीले यसमा पार्टी सभापतिलाई मदत गर्ने हो । मैले यसमा तीनवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भनेको छु । एउटा पार्टीको विधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने सन्दर्भमा यस पटक हामी चुक्नुहुन्न । हामी महामन्त्रीका रूपमा सभापतिलाई पूर्णरुपमा मदत गर्छौँ । हामीले गर्न चाहेको कुरा पनि पार्टी सभापतिले मान्नुपर्छ ।
विधानको अक्षरशः पालना गर्दा कतिपय ठाउँमा पार्टी शीर्ष नेता छुट्नुहुन्छ । विधानको परिपालना गर्दा विगतमा गर्दै आएको अभ्यास भन्दा फरक पनि हुन्छ । नेताहरूसँग बस्ने कुराकानी गर्ने अभ्यास छ । तर,यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न ।
दोस्रो,पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका थुप्रै नेताहरू पार्टीको एउटा शक्ति हो । सभापतिले उहाँलाई ढिलोचाँडो केन्द्रीय समितिभित्र ल्याइ नै हाल्नुहुन्छ । उहाँको अधिकारको कुरा हो । उहाँले मनोनीत गरेर ल्याउने कुरा गर्नु पनि भएको छ । मनोनीत गरेर ल्याइसकेपछि पार्टी सभापतिले उहाँसँग परामर्श गर्ने,तर विधानअनुसार काम गर्ने गर्नुपर्छ । परामर्श गर्ने नाममा विधानले राखेको शक्ति त्यहाँ लिएर जाँदा समस्या ल्याउँछ ।
तेस्रो कुरा,पार्टी सभापतिले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा ‘म मलाई मत नहाल्ने मान्छेको पनि सभापति भएको कुरा फिल गराउँछु । कसैले पनि न्यायका लागि अन्ततिर जानुपर्दैन’भन्नुभएको छ । पार्टी सभापतिको निर्णयमा पनि त्यो देखिनुपर्छ । त्यसमा हामीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ ।
बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनेजस्तै सभापति निर्वाचित भएको दुई सातामा भयो । योबीचको दुई हप्ताले त्यो सङ्केत गर्छ ? उहाँले जे बोल्नुभएको छ, त्यहीअनुसार अभ्यासमा जान खोज्नुभएको छ ?
उहाँको दोस्रो इनिङ्स भरखर मात्र प्रारम्भ हुँदैछ । केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकपछि केही वरीयताका इस्यु आएका छन् । पार्टीको पुरानो नेताहरूलाई मनोनयन गर्ने कुरा आएका छन् । त्यसप्रति पार्टी सभापतिको ध्यान गएको छ भन्ने म ठान्दछु । उहाँले यसलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ । पार्टीका साथीहरूको विचार पनि बुझिराख्नुभएको छ । उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ,त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । त्यही गर्ने कुरामा उहाँलाई मद्दत गर्ने हो । अहिले नै कुनै पनि टिप्पणी गर्ने कुरा एकदमै हतारो हुन सक्छ ।
वरीयता जस्ता कुरामा पार्टी सभापतिले विगतको परम्परा र अभ्यासलाई हेरेर एकदम उदार हुनुपर्छ । पार्टीमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूलाई पनि ठाउँ दिएर जाने कुराले उहाँलाई फाइदा हुन्छ । सिंगो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ।
तपाईंले वरीयताको इस्यु आएको कुरा बताउनुभयो । शेखर कोइरालालाई २० औँ नम्बरको वरीयतामा राखिएको कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा १० औँ महाधिवेशनमा धेरै सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि शेरबहादुर देउवालाई तेस्रोमा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रहेका नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । हामी उहाँभन्दा सिनियर हो,हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा उठेको थियो । तर,गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मसँग प्रतिस्पर्धा गरेको मान्छेलाई तेस्रो वरीयतामै राखेर जान्छु भन्नुभयो । तर,पछि त्यो निर्णय गरेर जाने कुरा ठीक पनि भएन । त्यसपछि हाम्रो पार्टी फुट्यो ।
आखिर वरीयता क्रमले मात्र नहुँदो रहेछ । तर,त्यसपछि १२ औँ महाधिवेशनमा देउवा पराजित हुँदा पनि सुशील कोइरालाले दोस्रो वरीयता दिनुभयो । १३ औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग रामचन्द्र पौडेल पराजित हुँदा पनि त्यही अभ्यास भएको थियो ।
सभापतिमा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने पार्टी विधानमा व्यवस्था भए पनि वरीयताबारे विधानमा कुनै उल्लेख छैन । हाम्रो विधानले दोस्रो वरीयतामा राख पनि भन्दैन,नराख पनि भन्दैन । वरीयता कसरी राख्ने भन्ने काँग्रेसमा परम्परा जस्तो बनेको छ । यो मूलतः पार्टी सभापतिको निर्णय हो । वरीयता जस्ता कुरामा पार्टी सभापतिले विगतको परम्परा र अभ्यासलाई हेरेर एकदम उदार हुनुपर्छ । पार्टीमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूलाई पनि ठाउँ दिएर जाने कुराले उहाँलाई फाइदा हुन्छ । सिंगो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ।
काँग्रेसलाई स्थायी भागबण्डावाला गुटरिहत बनाउन उहाँ लाग्नुपर्छ । हाम्रो मद्दत रहन्छ । पार्टीमा गुट रहन्छ,तर भागबण्डावाला गुटरहित पार्टी बनाउन निर्णयमा न्याय देखिनुपर्छ,महसुस हुनुपर्छ । वरीयताका विषयमा बाहिर जे आएको छ,पार्टी सभापतिले विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर जानुभयो भने नै उपयुक्त हुन्छ । यस्तै,पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूलाई तत्कालीन पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र ल्याउनुपर्छ । विधानलाई सङ्गतिपूर्ण बनाएर उहाँहरूसँग पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा परामर्श लिने र सल्लाह गर्ने परम्पराका रूपमा जानुपर्छ ।
पार्टी सभापतिलाई एउटा अभूतपूर्व मौका आएको छ । जुन समूहबाट उहाँ सभापति हुनुभयो, त्यो समूहको केन्द्रीय समिति, अरू संरचनामा वर्चश्व देखिएको छ । त्यसबाट उहाँले अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त गर्ने अनुकूलता छ ।
१० औँ महाधिवेशनपछि तेस्रो वरीयतामा राखिएका देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । १२ औँ र १३ औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समकालीन थिए । शेखर कोइरालाको हकमा त्यो आधार नभएर २० औँ नम्बरमा राखिएको भन्ने पनि छ नि ?
यो कुरा पार्टी सभापतिकै विवेकमा छोडिदिनुपर्छ । यसमा मैले धेरै टिप्पणी गर्ने कुरा पनि असुहाउँदो हुन्छ । उहाँको निर्णयलाई मान्ने हो । तर उहाँलाई सही निर्णय गर्नका लागि सही समयमा सही सुझाव पनि दिने हो, जुन कुरा मैले दिएको पनि छु ।
अर्कातर्फ उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ४० प्रतिशत मत ल्याएको उम्मेदवारले सार्वजनिकरुपमा ‘म भागबण्डावाला राजनीतिमा लाग्दिनँ’ भनिरहेको छ । किनभने, सार्वजनिकरुपमा बोलेको कुरामा मान्छे जवाफदेही हुनुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसमा गएको १५–२० वर्षयता भागबण्डावाला राजनीति एउटा दीर्घरोग जस्तो भएर बसेको छ । यसले पार्टीलाई गाँजेर बिरामी बनाएको छ । अहिले यसबाट मुक्त हुने अभूतपूर्व अवसर आएको छ । यतिखेर सभापतिको पदाधिकारी भएका हिसाबले म उहाँको सहयोगी पनि हुँ । उहाँलाई मैले भनिरहेको छु, भन्न चाहेको छु, यो मौकालाई छोप्नुपर्छ । यसो गरिए सिङ्गो पार्टीलाई मदत पुग्छ । यसमा सबैभन्दा बढी सभापतिको स्वार्थ छ ।
दुई–चार महिनापछि काँग्रेसमा सभापतिभन्दा तल भयानक प्रतिस्पर्धा छ । हाम्रो बीचमा अर्को महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा छ । सभापतिसँग न प्रतिस्पर्धा न केही । सभापति हामीभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ भनेर देखिनुपर्छ । पार्टी सभापति सबैको सभापति हो । पार्टी सभापतिको तहबाट हेर्दा हिजो कसले कसलाई मत हाल्यो भन्ने कुरामा निर्णयमा देखिनुहुँदैन ।
पार्टी सभापतिले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुभएको छ र बाँकी रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । काँग्रेसका लागि त्यो चाहिएको छ । यो बेलामा सभापतिको यतातिर दृष्टि पुगिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
हामी दुईजना महामन्त्री सल्लाह गरिरहेका छौँ । हामी तीनवटा कुरामा बढी लागौँ भन्ने छ । एउटा–पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामी सचेत रहनुपर्छ । यहाँभित्र हामीले पार्टी सभापतिलाई प्रभावित पनि गर्नुपर्छ,सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।
पार्टी संरचनामा सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्चश्वले आशा गरिएका नेता महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पङ्गु हुने धेरैको अनुमान छ । यो चुनौतीका बीच आफूलाई कसरी खरो उतार्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ ?
महामन्त्रीको काम नै सभापतिलाई बलियो बनाउने हो । त्यसैले सभापति बलियो हुँदै गर्दा हामीले असहज ठान्दै ठान्दैनौँ । महामन्त्रीलाई विधानले निश्चित भूमिका दिएको छ । त्यो भूमिका महामन्त्री बाहेक कसैले गर्दैन र गर्नै सक्दैन । विधानले दिएको त्यो भूमिकालाई हामीले इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी महामन्त्री खरो रूपमा उत्रिएर सभापतिलाई बल पुर्‍याउँछौँ ।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कसरी अगाडि बढ्दै छन् ?
केही समयपछि स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ । पार्टीको दैनिक काम गर्दा गर्दै हामी स्थानीय निर्वाचनमा आइपुग्छौँ । सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार गर्न सबै काम हामी गरौँ । पार्टी सभापतिलाई त्यसमा सँगै जोड्दै लिएर जाऊ भन्ने हाम्रो दोस्रो कुरा हो ।
तेस्रो कुरा,अहिले पार्टी सरकारमा छ । सरकारमा नभएको भए प्रति पक्षीय भूमिका कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा हामीले हेर्नुपर्थ्यो । अहिले हामी सरकारमा छौँ । सरकारको परफर्मेन्ससँग पार्टी जोडिन्छ । हामी सरकारसँग अलग रहनुहुँदैन । सरकार मन्त्रीहरूको जिम्माको हो । हामीले पार्टीको काम गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन । सरकारको कामले पार्टीको कामलाई पनि प्रभावित गर्छ । सरकारले सही काम गरोस्,गर्नुपर्ने काम गरोस्,नगर्नु पर्ने काम नगरोस् भन्ने कुरामा पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई मद्दत गर्ने र झक्झकाउने काम हामीले गर्नुपर्छ । यो पनि सँगसँगै गर्दै जाऊँ भन्ने छ । यसरी गयौँ भने आजका दिनमा महामन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने हाम्रो काम हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।
तपाईंहरु महामन्त्रीमा आइसकेपछि काँग्रेसभित्र र बाहिर एकखालको उत्साह छ । तपाईंहरूसँग अपेक्षा पनि बढी नै छ । अब त्यहीअनुसारको डेलिभरी पनि दिनुपर्छ होला । यसमा कत्तिको च्यालेन्ज ठान्नु भएको छ ?
एकदमै ठूलो च्यालेन्ज छ । काँग्रेस अधिवेशन,त्यसमा पनि महामन्त्रीको निर्वाचनको परिणामलाई विशेषरुपमा लिएको पाएको छु । यसबाट म अत्तालिएको त भन्दिनँ । तर,अहिले आएका प्रतिक्रियाले अझै बढी जिम्मेवारीको भारी बोक्न तयार हुनुपर्छ भन्नेतर्फ सचेत बनाएको छ । एउटा पार्टी पंक्तिभित्र उत्साह आएको छ । हाम्रो पार्टीमा ९–१० लाख पार्टी पङ्क्ति छ । हामीलाई भोट पनि त्यसरी नै आयो । उत्साह पनि त्यसरी नै छ । अब हामीले कुनै कुरामा यो भएन त्यो भएन भन्न पाउने अवस्था छैन ।
मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको के हो भने पार्टी सदस्यता नलिएको,पार्टी पङ्क्तिभन्दा बाहिर रहेको मान्छे,जसलाई काँग्रेस पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन,तर,तिनले काँग्रेस महामन्त्रीको परिणामपछि अबचाहिँ केही हुन्छ भन्ने सोचेका छन् । महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्दा यिनले काँग्रेसलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउँछन् र काँग्रेसलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यो सकारात्मक प्रभावले म काँग्रेसको सदस्य नभए पनि मलाई फाइदा हुने हो भनेर नै यस्तो सोचेका हुन् । त्यसैले चुनौती एकदमै धेरै छ । त्यसले मलाई उत्साही पनि बनाएको छ । अब लर्तरो पाराले अहिले जे गरिरहेको छु । त्यत्ति गरेर मात्र पुग्दैन । अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ,अझ बढी सचेत हुनुपर्छ । अझै बढी समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।
१३ औँ महाधिवेशनलगत्तै तपाईंले १४ औँ महाधिवेशनबाट काँग्रेसमा डिपार्चर चेञ्ज हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो भयो त ?
यो महाधिवेशनमा म एउटा समूहबाटै महामन्त्री लडेको हुँ । मैले सभापतिमा मत दिएको व्यक्ति पार्टी सभापतिमा परास्त हुनुभयो । पार्टीको सभापतिले महामन्त्रीमा मत हालेको व्यक्ति पनि महामन्त्रीमा परास्त हुनुभयो । हामी कसैले पनि चाहेको जस्तो भएको छैन । सभापतिले पनि त मलाई महामन्त्रीमा मत हाल्नुभएको होइन । मैले पनि सभापतिलाई मत हालेको होइन । तर,महाधिवेशनको हलले एउटा निर्णय गरिएको छ ।
पुस १० गते हामीले पदभार ग्रहण गरेपछि महाधिवेशनको कुरालाई छोडेर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने भनेर एउटा सामूहिक सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको अवस्था छ । त्यसैले महाधिवेशनले रूपान्तरणको यात्रा थालनी गर्छ भनेको जे कुरा सोचेको थिएँ । मैले सोचेका सबै कुरा भएनन् । अर्कोले सोचे जस्तो पनि भएन । तर,जे जति कुरा भएको छ,यसबाट अगाडि बढ्नका लागि आधारचाहिँ आएको छ । महाधिवेशनपछि सभापतिजीले सबैको सभापति बन्छु भन्ने कुरा सोच्नुभयो । त्यसबाट म उत्साहित छु । उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरेको नेताले ‘म भागबण्डावाला राजनीतिमा लाग्दिनँ’भनेको कुराले पनि उत्साहित बनाएको छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने डेलिभरीमा पनि पहिलेको भन्दा गुणात्मकरुपले फरक आयो । काँग्रेसमा नयाँ केटाहरू आए,यिनीहरूको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभयो । सरकार चलाउने तरिका पनि बदलियो । पार्टीको काम गर्ने तरिका पनि बदलियो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्दै जान सक्यौँ भने हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । अब हामी कुनै कुरामा रोकिनेभन्दा पनि यो अवधिभित्र धेरै कुरा ठिक बनाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा,पार्टीभन्दा बाहिर रहेको थुप्रै युवाहरूलाई पार्टीसँग कसरी जोड्नेहोला भनेर सोचिराख्थ्यौँ । अहिले उनीहरू सबै काँग्रेसमा जोडिन तयार भएर बसेको अवस्था छ । हामीले अलिकति ठिक काम गर्‍यौँ भने पाँच लाख मानिस अहिले नै थप्न सक्छौँ । यो कुराले पनि मलाई उत्साही बनाएको छ ।
१३ औँ महाधिवेशनपछि तपाईं निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्व परिवर्तनपछि मात्र काँग्रेसमा अन्य मान्छे जोड्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको दलिल थियो । तर, १४ औँ महाधिवेशनले मूल नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन । शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिएको अवस्था छ । काँग्रेसको आगामी यात्रा कस्तो रहला ?
हामीले यसमा अतिरिक्त मिहिनेत गर्नुपर्छ । आम चुनाव हुन बाँकी यो एक वर्षको अवधिमा हामीले पार्टी कसरी सञ्चालन गर्छौँ ?खासगरी देश कसरी सञ्चालन गर्छौँ ?हामी शासन कसरी गर्छौँ र डेलिभरी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि हामी अर्को निर्वाचनमा जाँदै गर्दा कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा सभापति अभूतपूर्वरुपमा बलियो आउनुभएको छ । काँग्रेसले चुनाव जित्यो भने पनि प्रधानमन्त्री को बन्ला ?स्वभाविकरुपमा हेर्दै गर्दा त पार्टी सभापति नै देखिनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा कुनै नौलो कुरा भएन । उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसै कारणले यो एक वर्षको अवधि (पुस देखि मङ्सिर) मा हामीले गर्ने डेलिभरी र हामी नचुक्ने कुराले यिनीहरूले गर्न सक्छन् है भन्ने पार्न सक्नुपर्छ ।
१४ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषीले भने झैँ ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्यो है ? उहाँको विकल्पमा काँग्रेसले कसैलाई अगाडि सार्ने अवस्था देख्नुहुन्न ? त्यसका लागि तपाई आफैँ पनि जमर्को गर्न सक्नुहुन्न र ?
उपयुक्त समयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल पनि गरौँला । पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । मैले स्वाभाविक कुरा भनिरहेको छु । उहाँ पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । हामी चुनावमा जान्छौँ । संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदै गर्दा सामान्यतः पार्टीको नेतृत्व नै सरकार चलाउने ठाउँमा आइपुग्छ ।
अब हामी त त्यो कुराका लागि तयार हुनुपर्‍यो । सभापति उहाँ नै हो । व्यक्ति उहाँ नै हो । नेता उहाँ नै हो । तर,प्रवृत्ति बदलिएको छ । काम गर्ने तरिका बदलिएको छ । उहाँसँग भएको पहिलेको टीम र अहिलेको टीम फरक हो । पार्टीभित्र उत्साहको कुरामात्र होइन,क्षमताको कुरा पनि हो । नयाँ साथीहरू आएका छन् । नयाँ उत्साह बोकेर आएका छन् । नयाँ योग्यता बोकेर आएका छन् । उनीहरूको डेलिभरी गर्ने तरिकै बदलिएको छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ । म त यसरी पनि सोच्दै जाऊँ,यसरी पनि काम गर्दै जाऊँ भन्नेमा छु । यसरी जाँदा हामी जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार हुन्छौँ ।
तर,हामीले केही कुरा पनि बदलेनौँ भने जनतासँग के भनेर अफर गर्ने ?हामीसँग नेतृत्व पनि पहिलेकै छ,काम गर्ने तरिका पनि जस्ताको त्यस्तै छ,डेलिभरी पनि पहिला जस्तो गर्थ्यो,अहिले पनि त्यस्तै छ भने हामीसँग अफर गर्ने कुरा केही हुँदैन । हामीलाई मौका देऊ भन्दा किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैनौँ । त्यसैले यो एक वर्षको अवधिलाई महत्त्वपूर्ण भनिरहेको छु ।
शेरबहादुर देउवाले सांगठनिक शक्ति पूर्णरुपमा आर्जन गरेको अवस्था छ । १३ औँ महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाको सद्भाव पनि उहाँलाई नै देखियो । सभापतिमा तीनजना प्रत्यासी पनि उहाँकै पक्षमा उभिए । अब उहाँले सांगठनिक शक्ति र व्यक्तित्व निर्माणका लागि के–के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
उहाँको सांगठनिक शक्ति अबका निर्णयहरूमा सबैले जितेको अनुभूति गर्ने कुरा हुनुपर्छ । त्यो भएन भने बिस्तारै कतिपय कुराहरू प्राविधिक लाग्न थाल्छन् । अर्ग्यानिक बनाउनुपर्‍यो । भोलि आम निर्वाचनमा टिकट लगायतका कुरामा गुटबन्दी नहोस् । सभापति त्योभन्दा माथि भएको अवस्था मान्छेलाई लाग्न थालोस् । त्यसले आफैँमा एउटा ताकत दिन्छ ।
अर्को,उहाँले सरकारको नेतृत्वमा रहेर अहिले गर्ने डेलिभरी मुख्य कुरा छ । अहिले जनतासँग जोडिएका सयौँ विषय छन् । कोरोनाको खोप,मल अभाव,शैक्षिक संस्था बन्द,माइतीघरमा उभिएर न्याय मागिरहेका मानिसहरूको विषय सरकारसँग जोडिएका विषय छन् । यो ठूलो कुरा होइन,दैनिक मान्छेले देखिरहेको कुरा हो । अहिले सरकारले यी सबै कुराको हल हामी गर्न सक्छौँ,यो नेतृत्वले गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।
अर्को कुरा,अब आउने निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि मत माग्न जाने काँग्रेसले हिजो के गरेर आयौँ भनेर होइन,पाँच वर्ष के गर्ने भन्ने कुराको योजना राखेर जानुपर्छ । त्यो पनि घोषणापत्रमा लेखेजस्तो योजना होइन । आजको हाम्रो अवस्था,स्रोत साधन,आफ्नो आवश्यकता सबै कुरालाई हेरेर डेलिभर गर्न सक्ने योजना दिन सक्नुपर्छ ।
यो एक वर्ष एकातिर डेलिभेरी गर्नैपर्‍यो । अर्कातर्फ,अर्को पाँच वर्षको तयारी गर्नुपर्‍यो । हामी पाँच वर्षको पूर्वतयारी र एक वर्ष डेलिभेरी गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । अर्थतन्त्र,स्वास्थ्य तथा गैरस्वास्थ्यको क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले मौका पाएको छ । त्यसमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । अब हामी महामन्त्रीले त्यसलाई संगठित गर्ने,नेतृत्वको छविलाई उज्यालो बनाइदिने काम गर्छौँ । त्यसका लागि हामीलाई ठोस कुरा चाहियो ।
आगामी निर्वाचनका काँग्रेसले उठाउने योजनाका विषयमा महामन्त्रीका रूपमा तपाईंले कसरी गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ ?
करिब एक वर्षदेखि नेपाली काँग्रेसमै आफ्नो जीवन बिताउनुभएका केही सिनियर र केही युवा प्रोफेसरहरूसँग मिलेर काँग्रेसले पाँच वर्षमा के गर्ने भनेर तयारी थालेको पुस ५ गते एक वर्ष भयो । यो काम हाम्रो निरन्तर छ । त्यतिबेला स्वयंसेवीका रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई मद्दत गर्ने भनेर काम गरेका थियौँ । अब यही कामलाई पार्टीको सम्पत्ति बनाउने विषयमा पार्टी सभापति र अन्य साथीहरूसँग कुरा गर्छु ।
हामीले एक मत नभएका विषयमा पनि बनाउँछौँ । हामीभित्र भएको एक मतलाई जनमत बनाउँछौँ ।
राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला गिजोलिएको छ । अदालतदेखि संसद्सम्म सहज अवस्थामा चल्न सकेको छैन । यी विषयलाई सत्तारुढ काँग्रेसले कसरी समाधान गर्छ ?
अब एक–दुई दिनपछि पार्टीका पदाधिकारी हामी बसेर सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका थुप्रै मुद्दामाथि छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँछौँ । सरकारको जिम्मेवारीका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन,आजका दिनमा काँग्रेस निर्णायक शक्ति हो भन्ने देखाउनु छ । हामीले दिशा दिने हो ।
हामीले ०६० सालको जस्तो काँग्रेस भएर सोच्नुपर्छ । त्योबेलामा हामी सरकारमा थिएनौँ,तर निर्णायक थियौँ । देशलाई संविधानसभा चुनावमा लाने कि नलाने ?लाने सोच्यौँ,लाग्यौँ । शान्ति सम्झौता गर्ने कि नगर्ने ?गर्ने भन्ने सोच्यांै गर्‍यौँ । हामीले जे सोच्थ्यौँ,देशलाई त्यो बाटोमा डोर्याउँथ्यौं । हामीले के सोच्ने हो,हामीसँग त्यो आत्मा विश्वास हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि पार्टी सभापतिलाई सिंगो पार्टीको बल भयो भने आत्मविश्वास हुन्छ । पार्टी सभापतिको ताकत भनेको पार्टी हो । चाहे अदालतको विषय होस्,चाहे एमसीसी होस्,चाहे अरू विषय हुन् । यी विषयमा हाम्रोबीचमा छलफल गरौँ,हामी एउटा धारणा बनाऔँ । पार्टी नेतृत्वलाई सिंगो पार्टीको ताकत दिऔँ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्याका विषयमा काँग्रेसभित्र दुईमत छैन भनेर बुझ्ने हो ?
हामीले एक मत नभएका विषयमा पनि बनाउँछौँ । हामीभित्र भएको एक मतलाई जनमत बनाउँछौँ । ०६० सालमा पनि पार्टीभित्र फरक–फरक धारणा रहन्थे । तर,पार्टीमा छलफल गर्दै गएपछि नेतृत्वले यो हो निर्णय भनेर पार्टीको मत बनाउँथ्यो । त्यो पार्टीको मतलाई सिंगो पार्टी पङ्क्तिले देशभरि जनमत बनाउँथ्यो । त्यो नै जनमत बन्थ्यो । पछिल्लो समय काँग्रेसमा यो रोकिएको जस्तो छ । हामी हाम्रो मतमै अलमलमा भएजस्तो हुन्छ । अब हामीले देखिने,बुझिने,बोलिने काँग्रेस बनाउनु छ । कहिलेकाहीँ केही विषय अप्रिय होला । तर,हामीले एक मत बनाऔँ । त्यो बनाएको मतलाई जनमत बनाऔँ ।
हिजोका दिनमा तपाईंले सडकमा राख्ने मत पार्टीको मत बन्छ कि बन्दैन ? काँग्रेसको महामन्त्रीका रूपमा त्यो मत अब सानेपामा जाहेर गर्नुहुन्छ ?
मेरा व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता कैयौँ विषय छन्,जुन विषय सडकमा सबैभन्दा पहिला उठाउनेमध्ये म परेँ । त्यही विषयलाई उठाएँ । पार्टीभित्र ठूलो आलोचना पनि भयो । तर,केही समय पछाडि पार्टी त्यही लाइनमा गयो । चाहे पहिलो संविधान सभाको चुनाव होस्,चाहे संसद् पुनर्स्थापनसम्म किन नहोस् । मैले कुनै पनि विषय आवेगमा आएर उठाएको होइन । पार्टी त्यसमा जानुपर्छ,किन जानुपर्छ भन्ने तथ्य र मेरो आत्मविश्वासका आधारमा उठाएका कुरा थिए । त्यसैले फरक के कुरामा हुन्छ भने हिजो स्वतन्त्र ढङ्गले सडकमा उठाउन सक्थेँ । मलाई अलि सजिलो थियो । अब मलाई लागेको कुरा पहिला पार्टी पङ्क्तिलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । अब मेरो राय कतिपय कुरामा हिजोको भन्दा ढिलो आउन सक्छ । तर,राय बदलिन्छ भन्ने होइन । म बदलिन्छु भन्ने होइन ।
म आफू उभिएको ठाउँमा पार्टीलाई उभ्याउने कोसिस गर्छु । तर,मलाई समय लाग्न सक्छ । हिजो यस्तो हुनुपर्छ भनेर म सार्वजनिकरुपमा पहिला बोल्थेँ । त्यो भनेको पार्टीभित्र मेरो मत बनाउने तरिका हो । बाहिर बोल्थेँ,सञ्चार माध्यममा आउँथे,पार्टीको बैठकमा कुरा राख्थेँ । मेरो कुरा पहिला मानिन्नथ्यो । एक–दुई महिना समय लाग्थ्यो । म बोलिराख्थेँ,लागि राख्थेँ,बिस्तारै गएर पार्टीको मत बन्थ्यो ।
अब मेरो काम गर्ने तरिका फरक हुने भयो । म यसरी बोल्न नपाउने भएँ । मलाई लागेको कुरामा म उभिन्छु । पार्टी सभापतिलाई भन्ने भएँ । पार्टीका साथीहरूलाई भन्ने भएँ । म पार्टीको मत बनाउने कुरामा लाग्ने भएँ । तर,कसरी लाग्ने भएँ भने पहिला बाहिर माहौल बनाएर भित्र ल्याउने होइन कि भित्र माहौल बनाएर बाहिर लाने ठाउँमा पुगेँ ।